Kulan Xasaasi Ah Oo Ka Dhacay Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Magalada Jowhar ee Caasimadda maamulka Hirshabeelle kulan gaar kula qaatay mus’uuliyiinta labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Waxaa la sheegay in kulankan ka dhacay jowhar uu yimid ka dib markii mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan looga yeeray Magaalda Jowhar si loo dardargeliyo howlaha labada Maamul ee dhinacyada amniga iyo adeegyada Bulshada.
Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan Wafdigii ka yimid ee ka qeyb galay kulanka dhexmaray Madaxweyne Waare iyo labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa faah faahin ka bixiyay waxyaabihii kasoo baxay kulankaas.
Guddoomiye kuxigeenka dhimnaca Siyaasada Maamulka Gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay in intii uu kulanka socday ay isla garteen dib u habeynta howlaha Canshuuraha iyo darder gelinta howlahaas.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu ku amray in ay ka wada Shaqeeyaan sugida amniga,isla markaana ay ka wada howlgallaan si tallaao dhinaca amniga ah loo qaado.
Xog:-Wasaarado Aan Shaqeyn Ku Dhawaad Muddo Bil Ah